Nagu saabsan - Beijing Convista Flow Control Qalabka Co., Ltd.
CONVISTA waxay u heellan tahay baaritaanka iyo bixinta dhammaan noocyada qalabka xakamaynta socodka sida Qaliinka, falida & xakamaynta qalabka, Bambooyin iyo qaybaha kale ee la xiriira & qalabka sida Flanges & rakiban, Shaandheeyeyaasha & Shaandheeyeyaasha, Wadajirka, Mitirada qulqulka, Kabaha, Qalabka loo shubay & been abuurka iwm
CONVISTA waa shirkad caalami ah oo wax soo saar u leh Qaliinka, Dhaqdhaqaaqa Valve & Xakamaynta, Bambooyin iyo agabyada la xiriira ee meelaha soo socda ee arjiga
Dheecaanno dagaal iyo qarax
Nadiif ama biyo wasakhaysan
Dheecaannada wax guma iyo kuwa nuujiya
Iskudarka dareeraha / adag iyo slurries
CONVISTA waxay taageertaa yoolalka Borotokoolka Kyoto waxayna qiimo weyn ku fadhidaa waxtarka tamarta ugu wanaagsan dhammaan alaabada iyo teknoolojiyada. Intaas waxaa sii dheer, howlahayaga shaqada iyo bay'ada shaqada waxaa loogu talagalay inay ubaahantahay tamar yar iyo alaabada ceyriin ee ugu macquulsan.
Si aad u noqotid alaabiyaha ugu kalsoon ee qalabka xakamaynta socodka isticmaalayaasha adduunka
Khabiir xasiloon, tamar-badbaadin ah iyo jawi saaxiibtinimo qulqulka socodka
Had iyo jeer ku adkeyso inaad ku qanciso macaamiisha adeeg daacad ah, adag, xirfad iyo hufnaan leh
Had iyo jeer u hoggaansanaanta xisaabinta adag ee alaab-qeybiyeyaasha, ujeeddada iskaashiga istiraatiijiyadeed & wada noolaanshaha guuleysiga
Had iyo jeer ku adkeyso inaad kobciso koox hibo leh xamaasad, tartan iyo xamaasad
Shaqaaluhu waa aasaaska iyo xudunta. Convista waxay ku tiirsan tahay shaqaalaheena-dadkani waxay ku dhaqmaan qiimaha Convista, waxay raadiyaan badqabka wax soo saarka iyo isku halaynta, iyo edeb, daacadnimo, iyo sidoo kale inay ixtiraamaan qiime kasta oo shaqsi, maalinba maalinta ka dambaysa Shaqaaluhu waa dhagaxa soo socda ee Convista, isla waqtigaas, Convista sidoo kale wuxuu u heellan yahay inuu sameeyo mid kasta oo ka mid ah shaqsiyaadka guuleysta. Maalgashiga Convista ee tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay, geeddi-socodka iyo sidoo kale aaladaha maareynta ayaa ka dhigaya mid kasta oo ka mid ah shaqsiyaadka inuu ku ciyaaro tayadooda si buuxda loo dheereeyo.
Shaqada Amniga, Shaqaale Caafimaad qaba
Convista way daashay si ay u hubiso in goobta shaqada ay tahay mid amaan ah oo caafimaad leh. Waxaan si isdaba joog ah ugu horumarinaa sanadba sanadka ka dambeeya dhinacan. Waxaan mudnaanta siineynaa badbaadadeena shaqaalaha dhaqanka ururkeena, waxaan si wada jir ah ula shaqeyneynaa shaqaalaha jawi aamin ah oo caafimaad qaba, waxaan tixgelineynaa amaan iyo caafimaad mid kasta oo ka mid ah howlaheena, iyada oo taa laga duulayo, waxaan si isdaba joog ah u shaqeynaa oo aan hubinnaa inaan fahamsanahay oo aan masuul ka nahay wax ka qabashada kala duwanaanta khataraha.
Waxaan dhiseynaa oo aan horumarinaynaa nidaamka maamulka amniga iyo caafimaadka, xarunta ilaalinta nabadgelyada wanaagsan, qalabka iyo baaritaanka caafimaadka ee joogtada ah dhammaantood waxay hubiyaan in goobta shaqada ay tahay mid caafimaad iyo shaqaale caafimaad leh. Convista waxay dejisay nidaamka caafimaadka iyo badbaadada shaqada, nidaamka maaraynta deegaanka, ujeeddadeedu waa inay shaqaalaheena siiso goob shaqo oo aamin ah.
Tababbarka Shaqaalaha iyo Horumarinta si loo Dhiiri geliyo loona Taageero Shaqaalaha inay Qoddaan Awooddeeda
Waxaan had iyo jeer ka go'an inaan siinno baaxad buuxda hibada iyo inaan sida ugu fiican uga faa'iideysano wax walba. Waxaan shaqaale kastaa u samaynaynaa qorshe horumarineed oo shaqo gaar ah oo ku saleysan xaaladdooda. Waxaan siinaa tabobar xirfadeed shaqaalaha safka hore, waxaanan siineynaa tababaro maareyn maamulka ah, waxaan siineynaa daraasad shahaadada mastarka shaqaalaha farsamada iwm.
Shaqaalaha Waa La Aqoonsan Yahay Oo Amaanay
Sannad kasta waxaan qiimeynaa xirfadda ugu fiican ee shaqada iyo doorka hogaaminta shaqaalaha safka hore ee farsamo yaqaan ahaan, waana bixinaa
gunno la siinayo bil kasta iyo sannad kasta. Maxaa intaas ka sii badan, waxaan sidoo kale qiimeynaa shaqsi tayo sare leh iyo
qalabku wuxuu ilaaliyaa shaqsiga wuxuuna siiyaa gunno iyaga.
La wadaag miraha
Halku-dhiggeenna soo koraya waa bilow ganacsi oo wada socda, wadaaga miraha.
Waxaan u maleyneynaa, Convista inay uga egtahay qoys shirkad, shaqaalaheena waa xubnaha qoyska, waxay ku socotaa isku qiimo iyo ujeedo ganacsi. La kulan qiimaha shaqaalaha, qiimeynta kooxda shirkadaha oo u abuur qol ballaaran oo horumarinaya iyo kor u qaadista shaqaalaha. Shaqaale la taagan shirkad lana wadaaga miraha bilowga ah.
Sannad kasta Convista waxay u dabaaldegtaa Bandhigga Guga, iyada oo loo mahadcelinayo mid kasta oo xubin ka ah xubinta.